Tohin’ny fananiham-bohitra tao Okraina, mamaky ady amin’ireo olompireneny i Rosia · Global Voices teny Malagasy
Manahirana ireo Okraniana sy ireo Rosiana i Vladimir Poutine
Voadika ny 12 Avrily 2022 11:44 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, عربي, Español, Français, Português, Ελληνικά, Nederlands, українська, English
Pikantsary teo amin'ny fantsona YouTube an'ny CBC Radio Canada: miandry eo amin'ny gara iray efa feno ireo mponina ao Saint-Pétersbourg. Olga, an-dalana ho any Espaina, nilaza fa: “Mety hiharatsy amin'ny fotoana rehetra ny toe-draharaha. Tena matahotra mafy aho.”
Hatramin'ny niantombohan'ny fananiham-bohitra nataon'i Rosia ao Okraina, olona maherin'ny 7000 avy ao Rosia nanao hetsika hanoherana ny ady no voasambotra. Raha mbola mitohy mandao an'i Rosia ireo orinasa Eoropeana anjatony ary mitohy maharitra ny fitokana-monin'i Maosko amin'ny toe-karena manerantany, mandositra ny fireneny ireo Rosiana.
Firenena maherin'ny 40 no nanakatona ny habakabany amin'ireo fiaramanidina rosiàna, mametra araka izany ny fahafahana mandositra mankany Azia afovoany, Kôkazy sy Afovoany-Atsinanana. Mba hisorohana ny andri-panoherana rehetra ao amin'ny firenena, manenjika tsy mbola nisy toa izany ny fanoherana i Kremlin, mandrahona famonjàna an'ireo media sy ireo mpanao gazety.
Manoloana ireo sazy mavaivay sy ny fanenjehana ara-tsôsialy, vao mainka mampidi-doza ny maneho hevitra manohitra ny fitantaràna ofisialy an'ny Governemanta. Raha toa ny firenena miha-marefo miha-marefo ary mitobaka ireo honohono mikasika ny lalàna miaramila mananontanona, nihantsy ady tamin'ireo olompireneny ny governemanta Rosiàna.
Ady iray atao amin'ireo media
Ireo vovonana lehibe anaty tambajotra sosialy no voalohany nahazo faneriterena. Tamin'ny 25 Febroary, noferan'i Môsko tamin'ny ampahany ny fahazoana miditra amin'ny Facebook. Ny 5 Martsa, Roskomnadzor, Rosiana mpandamina ny fifandraisan-davitra, no nandrara manontolo ny fidirana amin'ny Facebook manerana ny firenena. Nofafàna ireo kaonty Twitter an'ny Russia Today sy ny Sputnik, ireo mediam-bahoaka Rosiàna. Ho setrin'izay, nasiana teritery ny fidirana amin'ny Twitter ao amin'ny firenena.
Ny androtr'io ihany, niara-nandany lalàna iray manasazy ny fandefasana “vaovao tsy marina” ao amin'ny firenena ny Douma-mpanjakana. Na iza na iza manaparitaka vaovao tsy nivoaka ôfisialy avy amin'ny governemanta momba ny tafika Rosiàna mahakasika ny “hetsika manokana” ao Okraina, na izay mitaky sazy, dia azo saziana higadra hatramin'ny 15 taona. Nitondra ohatra marobe mikasika ny vaovao tsy marina izay tsy maintsy ho saziana ny Douma, anisan'izany ny fizaràna sary “novàna” ahitàna ireo fitaovan'ny miaramila may, ny fanaparitahana tatitra mikasika ny fanafihana manjo ny sivily sy ireo tombatombana momba ny fahavoazan'ny tafika Rosiàna.
Ny lalàna mikasika ny fakom-baovao dia tohin'ireo famerana napetrak'i Rosia tamin'ny 2019 tamin'ireo media izay, « tsy ampy fanajàna ny governemanta» na dia tena maivana be aza ny sazy tamin'ny telo taona lasa. Iharan'ny lamandy hatramin'ny 1,5 tapitrisa robla (izay 20 924 euros) ary migadra 15 andro, ireo olona manaparitaka vaovao “tsy azo antoka” mikasika ireo manampahefana ao amin'ny governemanta sy manakorontana ny filaminam-bahoaka.
Vokany, nihena be ny fidirana amin'ireo media vahiny. Tohin'ny fangatahan'ireo mpampanoa lalàna, « noferan’ i Roskomnadzor ny fidirana amin'ny Meduza, ny BBC, ny Deutsche Welle, sy ny Radio Free Europe. Ho valin'io hetsika io, natsahatry ny Bloomberg, ny Guardian sy ny BBC ny asan'izy ireo tao amin'ny firenena. Tafiditra tao anatin'ny lisitr'ireo “fikambanana tsy ilaina” ihany koa ny fikambanana iraisampirenena an'ireo mpanao gazety mpanao fanadihadiana OCCRP.
Manerana an'i Rosia, voatampim-bava ireo mediam-pirenena mpanakiana. Manoloana ny tsindry henjana, anisan'izany indrindra ny fandrahonana fanenjehana eny amin'ny fitsaràna, dia voatery nampiato ny asan'izy ireo ny Ekho Moskvy, Znak.com, The Village, Taiga.info, Dozdh, Tomsk's TV 2 sy ireo hafa koa. Mba hanamarinana ny fikatonany, notanisain‘i Znak “ireo faneriterena marobe izay nitranga vao haingana sy miantraika amin'ny asan'ireo media ao Rosia”.
Ireo izay tsy nanidy ny varavarany dia anaovana antsojay. Ny marainan'ny 5 Martsa, natao sava hao ireo biraon'ny gazety Pskovskaya Guberniya. Nobahanana avy eo ny tranonkala.
Voatery namafa ireo lahatsorany sy tsy namoaka afa-tsy ireo tatitra ofisialy an'ny Fanjakana ireo media tsy mbola nanatsahatra ny asany. Media roa ambinifolo no nilaza fa hatsahatr'izy ireo ny fametrahana ny ady ho lohateny vaventy amin'ny gazety. Anisan'ireo ny The Bell, VPost, sy The Blueprint. Novaya Gazeta, izay nahazo ny Loka Nobel ho an'ny asa fanaovan-gazety tamin'ny 2021, dia namafa ny ankamaroan'ireo lahatsoratra mifandraika amin'ilay ady.
Ady amin'ny mponina
Ireo fitsapankevitra nataon'ny Fanjakana dia milaza fa manohana ireo “hetsika manokana” ao Okraina ny ankamaroan'ireo Rosiàna . Tondroin'ireo vokatra azo fa ireo mponina ao Môsko sy Saint-Pétersbourg, indrindra fa ireo tanora, dia tena manohana manokana ilay hetsika. Manoloana ny fitomboan'ny famoretana ao amin'ny firenena, marobe ireo izay mametraka ahiahy amin'ny fahamarinan‘ireo fitsapankevitra ireo.
Tamin'ny 1 Martsa, reny roa sy zaza dimy no nosamborina noho izy ireo nametraka voninkazo teo alohan'ny masoivohon'i Okraina tao Môsko. Samy voampanga ireo reny roa ireo noho ny tsy fanajàny ny adidy maha-ray amandreny azy sy fandikàna ireo baiko momba ny hetsika ho an'ny daholobe.
Olona anjatony no voasambotra isanandro noho ireo fihetsiketsehana fanoherana ny ady sy fanoherana ara-politika. Manao fisavàna sy fisamborana manerana ny firenena ny polisy, raha toa ireo olompirenena mikasa fotsiny ny hampiseho fanohanana ny vahoaka Okraniàna, ao anatin'izany ny fanaovana fihetsiketsehana sy ny fiampangàna ny ady eny amin'ireo tambajotra sôsialy.
Tsikilovin'ireo tomponandraikitra ao Môsko ireo hafatra rehetra avoaka eny amin'ny tambajotra sôsialy misy ifandraisany amin'i Okraina ary ampiasàny ny rindrambaiko famantarana endrika, « Sphere », mba hamantarana sy hisamborana ireo olona mampiasa fiara fitaterana iombonana. Hatramin'ny nanombohany tamin'ny 1 Marsta 2020, maherin'ny 2.788 ireo olona voasambotra rehefa niakatra tany anaty metro. Hatramin'ny 24 Febroary, mampiasa “Sphere” ny polisy mba hisamborana ireo Moskovita sahy maneho ankarihary ny fanoherana ny ady.
Gejain'ireo tomponandraikitra amin'ny alalan'ny fanamafisana fanarahamaso ireo antoko mpanohitra rehetra. Naharay fampitandremana fisamborana avy amin'ny mpampanoa lalàna ireo mpanaraka an'i Alexandre Navalny, lehiben'ny mpanohitra, mba hisorohana izay rehetra mety ho hetsika goavana. Ny marainan'ny 6 Martsa, nosavain‘ireo polisy manokana ireo biraon‘i Vladimir Arzhanov sy Ekaterina Aleksandrova, mpanampy an'ireo solombavambahoaka mahaleotena an'ny filankevitry ny tanànan'i Novosibirsk.
Voakendry ihany koa ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona manerana an'i Rosia. Voasava tamin'ny 4 Martsa ireo biraon'ny Memorial, fikambanana rosiàna tranainy indrindra mpiaro ny zon'olombelona, mpandray an-tsoratra ireo heloka bevava atao amin'ny maha-olombelona, nataon'ny Firaisana Sovietika. Nosavain‘ireo manampahefana ihany koa ireo biraon'ny “Comité d'assistance civique”, fikambanana môskôvita iray mpanome fanampiana ho an'ireo mpifindra monina ao Rosia.
Mandefa fanentanana filazam-baovao voarindra iray ihany koa any amin'ireo sekoly Rosiàna ireo minisitera. Vao tamin'ny 1 Martsa, lesona manokana mitondra ny lohateny hoe “Ny Fireneko” no nozaraina mba ho aparitaka avy hatrany any amin'ireo mpianatra, manomboka kilasy faha-6 hatramin'ny kilasy faha-10. Notsipihan‘ny tatitra nataon'i Vkontakte fa “voarain'ireo mpianatra ny vaovao mikasika ireo antony nanery ny mpitondra antsika sy ny Governemanta, handefa miaramila any amin'ny tanin'i Okraina ; milaza fa tsy ady izany, fa hetsika manokana ho fitandroana ny fandriampahalemana, ka ny tanjona dia ny hiaro ny vahoakan'ny Repoblika Entim-bahoaka ao Donetsk sy Louhansk ary hanakanana ireo nasionalista mandrahona ny vahoaka Rosiàna.”
Ny 3 Martsa, nanomana lesona mikasika an'ireo “mpiaro ny fandriampahalemana” ny minisitry ny fanabeazana Rosiàna ho an'ireo sekoly rehetra manerana ny firenena. Ireo lesona ireo dia ampahany amin'ny tetikasa federaly an'ny Ivontoeram-panjakàna momba ny fanabeazana antsoina hoe “Fanabeazana ho tia tanindrazana ho an'ireo olompirenen'ny Federasiona Rosia”. Zazavavikely mpihira iray, 12 taona, Sofia Khomenko, no manafàna ny fandaharana izay manamafy fa, vahoaka iray ihany ny vahoaka Okraniana sy Rosiàna, fa mikasa ny hampizarazara sy haka an'i Eoropa Atsinanana ireo Tandrefana. Nampiany ihany koa fa i Amerika no nanao ny ankamaroan'ireo heloka bevava mikasika ny ady nandritra ny 70 taona lasa, fa namadika an'i Rosia ny OTAN ary tafiditra an-tsokosoko tanterana tao anatin'ny governemanta okrainiàna ireo nazis.
Naato hatramin'ny 14 Martsa ireo sidina anatiny mankany amin'ny faritra afovoany sy atsimon'i Rosia. Ireo fiaramanidina dia tsy mijanona intsony manakaiky ny sisintany atsimon'i Rosia ary voakasik'izany ireo tanànan'i Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Gelendzhik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-on-Don, Simferopol ary Elista.
Ireo mpiasan'ny sisintany rosiàna dia nampihatra famotorana lava be, fisavàna sy fandrahonana tamin'ireo olona maniry te-hiala ny firenena. Anontaniana ireo olona mikasika ny fahitàny ny Filoha, ny ady ao Okraina, ary koa mikasika ny antony sy ny faharetan'ny dian'izy ireo.
Marobe ireo olona ambony no voaroaka tamin'ny asany noho izy ireo nanao fanambaràna manohitra ny ady. Ekaterina Dolinina, talen'ireo sarimihetsika Polet sy Zvezda, dia voatery nametraka ny fialàny noho izy voalaza fa nanao sonia taratasy iray fanoherana ny ady tamin'ny 26 Febroary.
Efa miatrika tsy fahampian-tsakafo sahady i Rosia. Mametraka famerana vonjimaika amin'ny fiantsenàna rehetra ireo tranombarotra lehibe. Ny vondrona X5, izay mitantana ireo tandavana magazay Pyaterochka, Perekrestok, Karusel ary Chizhik, dia nanambara fa : “Mba tsy hisian'ny fahatapahana amin'ireo vokatra ilaina andavanandro, feran'ireo tandavana magazay ao anivon'ny orinasa sy ny “hypermarché” anaty tambajotra Vprok.ru Perekrestok, ny habetsahana fiantsenana betsaka amin'ireo vokatra sasany”. Azo sainina hitarika tsy fahampian'ny sakafo eran-tany ny ady ao Okraina.
Lehilahy an'aliny manerana an'i Rosia no naharay antso ho an'ilay hetsika ara-miaramila. Ireo taratasy, antso an-tariby sy imailaka dia tonga taorian'ny famoahana ilay didim-panjakàna tamin'ny 18 Febroary, nataon'i Vladimir Poutine. Notakiany tamin'izany ny tsy maintsy hanaovan'ireo rehetra miaramila fiandry ny fiofanana ara-tafika.
Voararan'ny banky foibe ny famindràna vola maherin'ny 5.000 dolara amerikana ho an'ireo fianakaviana any ivelany. Ity didim-panjakàna ity dia ho tohin'ny fandraràna nataon'i Vladimir Poutine an'ireo rehetra fandefasana vola vahiny mankany amin'ireo tsy mipetraka any ivelany, amin'ireo fampindramam-bola ho an'ireo kaonty amin'ny banky vahiny sy ireo fandefasana vola avy amin'ireo mpanome tolotra fandoavam-bola elektronika iraisam-pirenena.
Naneho ny faniriany hisian'ireo sazy henjana kokoa ny Douma -mpanjakana. Tamin'ny 3 Martsa, nanolotra volavolan-dalàna iray ny Antoko demokratika liberaly handefasana ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborina noho ny fandraisany anjara tamina famoriambahoaka manohitra ilay ady, ka hanao fanompoam-pirenena any Donbas sy Luhansk. Nolavin'ny sekreteran'i Vladimir Poutine misahana ny fifandraisana amin'ny gazety izany hevitra faneriterena ireo mpandray anjara amin'ny fihetsiketsehana izany.
Mbola hitohy hiha-henjana hatrany ireo fanenjehana ataon'ny governemanta Rosiana amin'ireo olompireneny. Arakaraka ny fitokàna-monin'ny firenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no vao mainka koa mampiakatra ny feon'ireo mponina ao anatiny. Nogadraina na nalefa sesitany avokoa ireo rehetra izay heverina ho afaka hanomana fanoherana henjana. Hazaina izay sahala amin'ny toa manana fihetseham-po manohitra ny ady, tazonina sy rahonana mba hikombona ny vavany. Samy sahiran-tsaina amin'i Vladimir Poutine avokoa na ny Okraniàna na ny Rosiàna.
Pour plus d'informations sur le sujet, consultez notre couverture spéciale L'invasion russe en Ukraine. ………….Raha mila fanazavàna fanampiny mikasika ity lohahevitra ity, tsidiho ny fandrakofanay manokana “Rosiana manani-bohitra ao Okraina.”